Kaadị kaadi mkpọ pọta Box-tub Packaging Box-BAM.
Kaadi akwukwo nkita nke ihe nkita
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Cylinder Tube
Kaadị nke kaadiboodu maka nri nkịta
Mara onye hụrụ anụ ụlọ n'anya, kedu ihe ị ga-eji ju ya anya na igbe a na-eji cylinder tube maka ịchekwa nri nkịta. Edere igbe ọkpọ a nke nri nkịta ka ọ dị mkpa iji hụ na echekwara nri ahụ nke ọma na-enweghị ezigbo ya. Igbe onyinye dị okirikiri bụ nhọrọ dị egwu maka ndị dị njikere ịchọta ihe pụrụ iche maka ndị enyi nkịta hụrụ ha n'anya. I nwekwara ike inweta nke a n’onwe gị ka ị kpọtara ya anụ ụlọ gị. Ọ bụ na nke ahụ anaghị abụkarị mgbe anyị hụrụ ndị anyị na-azụ ahịa n'anya. Anyị na-elekọta ha. Ya mere, zụta igbe a ma mee ka ndị ọzọ mara na ị nwere onye ọzọ n’ime ezinụlọ gị nke dị mkpa dịka ndị ọzọ.
Beautifulzọ mara mma iji chebe nkịta gị nwere nchekwa na nnukwu onyinye maka ndị nwe nkịta. Enwere ike ịhazi igbe mpempe akwụkwọ cylinder tube a. Ọ bụ ihe siri ike ma mara oke mma.
-Mgba mkpuchi mkpuchi igbe
-Ndabere na njedebe ele igbe oriọna
Igbe mkpuchi nke cylinder tube na-eji ohere dị ala eme ihe mgbe edobere ya na igbe nchekwa ndị ọzọ. Ọ na - eme ka nri ghara nchekwa ma chekwaa isi ha. Ngwaahịa dị elu maka inye ya ndị niile nkịta hụrụ ya n'anya. Ọ bụ ọrụ na-agwụ ike ịchekwa nri nkịta na-ezighi ezi na-abakarị na ngwugwu rọba. Yabụ, mee ka ọ dịrị ndị hụrụ nkịta n'anya mfe ma na-agba mbọ ịchekwa nri nkịta ha. Wetinye igbe a juru anya na usoro ọgwụgwọ kachasị amasị gị. Enwere ike ịhazi igbe nkwakọ ngwaahịa ma jiri ya ọtụtụ oge. Ihe dị elu eji eme igbe ahụ na-enyere aka na-ejigide igbe dị egwu nke igbe ahụ.